Burmese on the Move | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
Category Archives: Burmese on the Move
Invitation to the 2nd Waso Robe Offering Ceremony – Brooklyn, NY
ဒုတိယအကြိမ် စုပေါင်း ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အလှူပွဲတော် ဖိတ်ကြားလွှာ
မေတ္တာပါရမီကျောင်းတိုက်တွင် ဒုတိယအကြိမ် စုပေါင်း ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်
အလှူပွဲတော် ကျင်းပရာဝယ် ဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အား
ဝါဆိုသင်္ကန်း၊ ဆွမ်း အစရှိသည်တို့ကို လှူဒါန်းပြီး အတူတကွ ရေစက်ချ
တရားနာယူလိုပါသဖြင့် ကြွရောက်ကြပါရန် နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍
You are cordially invited to the 2nd Waso Robe Offering Ceremony at
the Metta Parami Monastery.
Please come and share merits by offering alms food and requisites to
the residents and invited venerable monks.
Date – August 14, 2011 (Sunday)
Time – 10:00AM – 1:30PM
Place – 185 Madison Street, Brooklyn, NY 11216
Ph – (718) 230-0605
A/C train Nostrand Ave Station.
G train Bedford/Nostrand Ave Station.
Suggested Donation လှူဒါန်းနိုင်ရန်
– 1 Complete Robe သင်္ကန်း ၁ စုံ $50
– 1 Upper Robe ဧကသီ ၁ ထည် $30
– 1 Lower Robe သင်းပိုင် ၁ ထည် $20
– Umbrella/ Slipper ထီး / ဖိနပ် $10
– Food and requisites ဆွမ်း ဆွမ်းဟင်းနှင့် ဘောဇဉ်များ
Posted by oothandar on August 2, 2011 in Burmese on the Move
Burmese Democratic Forces in Oregon to mark 88 – 23 Year
အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်က မြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ ၈လေးလုံး နှစ်ပတ်လည် ကျင်းပမည်
ရွာဆော်ကြီးဖိတ်စာ၊ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၁
Posted by oothandar on July 31, 2011 in Burmese on the Move
ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရရှိရေး နယူးယောက်ရှိ မျိုးချစ်ပြည်သူများ၊ မြန်မာ့အရေးထောက်ခံသူများ စုပေါင်းပြီး ၈ လေးလုံး နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတရပ်ကို နယူးယောက်မြို့တွင်ကျင်းပပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မိဘပြည်သူများအား လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။ Read the rest of this entry »
LA Burmese prepare for 88 – 23 year Event – Invitation
Date – 7th August 2011 Sunday, 10 AM to2PM,
Burmese Buddhist Monastery, La Puente
Posted by oothandar on July 25, 2011 in Burmese on the Move
၆၄ နှစ်မြောက် မဲဆောက် အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ
အခမ်းအနားအတွင် ဗိုလ်ချုပ်နှင့် အာဇာနည်တို့၏ ဓာတ်ပုံ ၁၀၀ ကျော်ကို ခင်းကျင်းပြသပါမည်။
Posted by oothandar on July 18, 2011 in Burmese on the Move
64 th Anniversary of Burma Martyrs Day – Invitation
အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တရားနာ ကြွရောက်ပါရန် နှိုးဆော်စာ
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းစဉ်ကာလတွင် အသက်ပေးလှူသွားခဲ့သည့် တိုင်းပြုပြည်ပြု ပုဂ္ဂိုလ် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏
(၁) တပါးကျွန်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေးအရယူပေးခဲ့သည့် ကျေးဇူးတရားကို အောက်မေ့ခြင်း
(၂) တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးစု တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံအပေါ် ထားရှိသည့် မြင့်မြတ်သည့် စိတ်ဓါတ်ကို အောက်မေ့ ခြင်းတို့ ဖြင့် (၆၄)ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ တွင် သံဃာတော်များအား အာရုဏ်ဆွမ်းကပ်လှူကာ ရေစက်ချ အမျှဝေခြင်းအမှုကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Read the rest of this entry »